Malunga noBrad, uMseki wethu
Uvavanyo lwethu lwe-OCD
Uvavanyo lokuqina kwe-OCD
Uhlobo lovavanyo lwe-OCD
Konke malunga ne-OCD
Thatha uvavanyo lwe-OCD
Abantu bahlala bezibuza ukuba yintoni inkcazo ye-OCD yokwenyani kunye nendlela yokufumana kunye thatha uvavanyo lwe-OCD. Esi sithuba siza kukunceda uqonde i-OCD kwaye phi kwaye njani kwaye ufumane kwaye uthathe uvavanyo lwe-OCD.
Ubume obungalunganga obuphambanisayo.
I-OCD ifumene ingqalelo ebanzi, ngenxa yeendlela ezingaqhelekanga le Iimpawu ze-OCD Bazibonakalise kwaye beyinto ebhekiswa kuyo kwiinkcubeko ezininzi. Esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba abantu bahlale bezibuza ukuba banazo na ezinye zeendlela zethu zemihla ngemihla kunye neetics ezingaqhelekanga zisenokukhumbuza ukunyanzelwa okuhlala kunxulunyaniswa ne-OCD. Kodwa, ngokungafaniyo nabo banokhetho olwahlukileyo ebomini babo, abo bane-OCD bashiyeka bekwimeko yoxinzelelo, uxinzelelo kunye noloyiko. Ukungazi ukuba unayo i-OCD kungenza konke oku kube nzima nakakhulu. Ke ngoko, inyathelo lokuqala lokufumana kwakhona kwi-OCD kukumisela ukuba unayo okanye awunayo i-OCD.
Uyazi njani ukuba yi-OCD?
Nangona isengumceli mngeni, iminyaka yezifundo zonyango ibonakalise iindlela ezininzi fumana ukuba yi-OCD kwaye yahlule kwezinye iingxaki, ezinokuthi zifane ngendlela ezibonisa ngayo. Kukho uluhlu olubanzi lokunyanzelwa komntu one-OCD anokuba nayo, ukusukela ekuhlambeni izandla zakho ngokungenangqondo kwamaxesha ukuya kwiingcinga zangaphakathi ezingenakuchaphazela ubuntu bakho. Eyona ndlela yokufumanisa ukuba unayo i-OCD yile thatha uvavanyo lwe-OCD. Nazi iindlela onokumisela ukuba une-Obsessive-Compulsive Disorder:
Ngaba uneengcinga ezingafunekiyo zangaphakathi?
Ukuqwalaselwa yinto engafunekiyo, iingcinga ezingena ngaphakathi, uloyiko, okanye imifanekiso yengqondo. Abantu abathile abaphethwe yi-OCD bafumana ezi ngcinga. Okukhona kugcwele i-OCD, kokukhona ziya kuthi qatha imini yonke. Umntu ngamnye ophethe i-OCD uya kuba nezinto ezahlukeneyo ezibangela inkxalabo. Aba babiziwe iintlobo ezingaphantsi ze-OCD. Zininzi iindidi ezahlukeneyo. Imizekelo yongcoliseko, ukujonga, ukungakhathali, ubudlelwane be-OCD, i-OCD yobufanasini, i-pedophilia OCD, inkolo ye-OCD, ukwenzakalisa i-OCD, kunye nokubetha i-OCD.
Ngaba unokunxibelelana nayo nayiphi na kwezi ntlobo ze-OCD? Okanye ngaba kukho olunye uloyiko olwenza uxhalabe? Ukuba kunjalo, ukukunceda misela ukuba loluphi uhlobo lwe-OCD onayo, thatha le Uvavanyo lwe-OCD subtype.
Ngaba ujongana noxinzelelo oluphezulu ngamanye amaxesha?
I-OCD sisifo esinexhala esidala ukungenelela, iingcinga ezingafunekiyo (ukutyeba). Le meko ihlala ibangela inkqubo 'yokulwa okanye yokubhabha', ngakumbi i-amygdala. Xa le nkqubo ichukunyiswa, imizimba yethu igcwele i-adrenalin ekhokelela kwiimvakalelo ezininzi zomzimba esithanda ukuzibiza ngokuba "luxinzelelo." Ngaba ufumanisa ukuba ezinye iingcinga, uloyiko, abantu, iindawo okanye amava abangela uxinzelelo?
Ngaba wenza isimilo esinyanzelekileyo? Ngaba uyabaphepha abantu, iindawo kunye namava athile?
Njengomphumo wokuba ne-obsessions ebangela uxinzelelo, umntu one-OCD uya kuziva isidingo sokwenza ukunyanzelwa. Ukunyanzelwa kunjalo nokuba umntu one-OCD uzama ukunciphisa, ukunciphisa, ukunciphisa, okanye ukunciphisa uxinzelelo okanye uloyiko kwi-obsession. Imizekelo yokunyanzelwa kukujonga, ukubala, ukucoca, ukufuna ukuqinisekiswa kwabanye, ukukhanyisa, ukunyanzeliswa kwengqondo, ukuthintela, ukuhlamba, ukuthandaza, kunye nezinye iindlela zokuziphatha zokuthintela. Ngaba ukhe unxibelelane nenye yezi? Ngaba uyakwenza okunyanzelekileyo?
Ngaba uyabambeka ekwenzeni izinto owaziyo ukuba bekungafanelekanga ukuba uzenzile?
Abantu abanengxaki ye-OCD banamaxesha apho baqonda ukuba akufuneki benze izinto ebebezenza (ukwenza izinto ezinyanzelekileyo). Siyaziqonda ezi zenzo zibubudenge xa ​​singakhange sibangelwe luxinzelelo. Kukule mizuzu apho sizisa iingcinga kunye nengqiqo kunyanzeliso ebesisenza okanye iingcinga ebesinazo kwaye siqonde ukuba azinyani okanye ziyinyani. Ngelishwa, nje ukuba sikhuthazwe yenye into, siyakulibala oku kwaye sizama nje ukuphila. Ngaba uyaziqonda xa usenza izinto ezithile okanye isimilo esithile ukuba zibubudenge?
Olunye uphawu oluqhelekileyo lokuphazamiseka okungafunekiyo kukuzikhetha. Abanye abantu bayayeka ukuya esikolweni, ukuzihlalela nabahlobo, ukuphulukana nobudlelwane, ukuyeka imisebenzi yabo, njl. Benza oku ngethemba lokuba i-OCD yabo iya kuqala ukubashiya bodwa. Ngelishwa, oku akusebenzi. Ngaba uye wazihlukanisa unethemba lokuba i-OCD yakho iya kukushiya wedwa okanye ihambe?
Ngaba ujongene nokudakumba?
Ngenxa yeengcinga zokungena ngaphakathi, uxinzelelo oluphezulu, ukwenza ukunyanzeliswa esingafuniyo ukukwenza kunye nokuzihlukanisa kulula ukubona ukuba i-OCD idala njani uxinzelelo. Omnye umba yi-OCD iyaqhubeka nokuthatha izinto abazithandayo nabazikhathaleleyo. Ngenxa yoko, olunye uphawu lwe-OCD luxinzelelo. Ngaba iingcinga zakho kunye namava akho obomi akwenza uzive uxinezelekile?
Uyekile ukuphila ubomi obufunayo?
I-OCD ithatha ukuthatha ilizwe lomntu. Akuqhelekanga ukuba abantu banikezele ngamathemba kunye namaphupha ngekamva. Akuqhelekanga kubantu abane-OCD ukuyeka isikolo, imisebenzi, ubudlelwane, ubuhlobo, ukutshata, ukuba nabantwana kunye nokuqala intsapho. Oku kuhlala kusenzeka kuba banamathele kwimowudi yokusinda kwaye abaziva ngathi abanasakhono sokufezekisa iinjongo zabo kunye namaphupha abo. Esi sesinye isizathu sokuba ukufumana uncedo kwi-OCD kubaluleke kakhulu. Ayizukuxhasa kuphela ekuphumeni koxinzelelo, ukunyanzelwa, kunye noloyiko, iyakukunceda ufezekise iinjongo kunye namaphupha obuhlala ufuna ukufezekisa ebomini bakho. Ngaba uye wancama nawaphi na amaphupha akho ebomini?
Enye into engathethi kangako malunga nento enokwenzeka kubantu abane-OCD kukuba baqala ukuzinyanga. Olu nyango lokuzibamba lunokwenzeka ngeendlela ezininzi. Abanye abantu abane-OCD baya kusebenzisa utywala okanye intsangu, abanye baya kusebenzisa amayeza kagqirha. Abanye banokusebenzisa ubudlelwane, kunye nokwabelana ngesondo ukuzama ukubaleka i-OCD yabo. Kunqabile ukuba abantu abane-OCD basebenzise iziyobisi ezinzima zokuzonwabisa.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga Amayeza e-OCD, tyelela lethu Isikhokelo seyeza se-OCD.
Wonke umntu one-OCD ozisebenzelayo uyenzela ukuzama ukuyeka iingcinga ezingxamisekileyo. Basebenzisa nayiphi na indlela yokuzenzela amayeza ukuzama nokuziphazamisa kwimpembelelo ye-OCD. Ukuzinyanga ngokwakho kuhlala kwenza izinto zibe mbi ngakumbi. Uninzi lwabantu luya kuthi lubonakalise ukuba iimpawu zabo ze-OCD ziya zisiba mbi ngakumbi xa behlile kunxila okanye phezulu. Kungenxa yokuba aba bantu bazama nje ukunciphisa iintlungu zabo kwi-OCD, ngethemba lokuba ziya kudlula, esi sesinye isizathu kubalulekile ukufumana Unyango lwe-OCD. Ngaba uyazinyanga unethemba lokuba iingcinga zakho zokungena ziya kuhamba?
Iindlela ezilungileyo zokufumanisa ukuba yi-OCD
Uvavanyo lwe-OCD olukwi-Intanethi
Ukuba usazibuza ukuba ngaba une-Obsessive-Compulsive Disorder, zininzi iindlela onokukufumanisa oku. Enye yeendlela ezilula kukuba thatha iphepha lemibuzo le-OCD elikwi-Intanethi.
Uvavanyo lwe-OCD lwakho
Enye yeendlela eziqhelekileyo nezilula zoku Chonga ukuba unayo i-OCD Ngaba zibuze ukuba ngaba ungena ngaphakathi, ungazifuni iingcinga rhoqo? Ukuba ucacile ukuba yintoni ukuthanda kakhulu, ngaba unazo? Ukongeza, ukuba ucacile ukuba yintoni na esisinyanzelo, zibuze ukuba kunzima kangakanani kuwe ukuzinyanzela ukuba uyeke ukwenza le minqweno.
Fumana kwaye ufumane Uncedo kwi-OCD Therapist
Enye indlela efanelekileyo yokufumana ingcali ye-OCD yendawo kukuya kwiziko le-OCD lamazwe aphesheya kwaye ukhangele umboneleli. Oku kunokwenziwa ngokuya kwiwebhusayithi yabo www.IOCDF.org kunye nokukhangela umboneleli ngasezantsi ngasekunene. Apha ungangena ikhowudi yakho ye-zip, isixeko, okanye ilizwe kwaye ubone ukuba zikhona na iingcali ze-OCD zalapha kwindawo yakho. Nje ukuba ufumane enye, unokwenza idinga lokuqala kwaye baya kuba nakho ukukukhokela nge Imibuzo ye-OCD, Uvavanyo lwe-OCD obsession, okanye Uvavanyo lokunyanzelwa kwe-OCD. Banokukunceda ukuba uchonge oluphi uhlobo lwe-OCD onalo kunye novavanyo lwe-OCD subtype.
Ekugqibeleni, eyona nto ibaluleke kakhulu kukuchonga ukuba unayo i-OCD okanye awunayo. Ukuba yi-OCD, yazi ukuba kukho unyango olusebenzayo lwe-OCD. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokuba wenzeni ukuba uyazi ukuba yi-OCD, bona eyethu Isikhokelo sokusinda kwe-OCD.
Ukubuyiselwa kwakhona kuqala apha, thatha uvavanyo lwe-OCD
Usabuza imibuzo ukuba ingaba yi-OCD okanye hayi? Fumanisa namhlanje.
© 2021 ocdtest.com. Onke amalungelo agciniwe.
Nceda ufake iinkcukacha ezingezantsi
Njengabanye abantu abane-OCD, sisithembiso sethu sokuba UNGEKE ugaxeke kuwe. Injongo yethu ekufumaneni olu lwazi kukuqhubeka nokubonelela ngezixhobo ezongezelelweyo zokukuxhasa xa uphuma kumjikelo we-OCD. Uya kuba nakho ukuphuma kule ngalo naliphi na ixesha.
Khetha olunye lweemvavanyo ezizodwa ezingama-38 ze-OCD oza kuzithatha*
Khetha olunye lweemvavanyo ezizodwa ezingama-38 ze-OCD oza kuzithatha1 - Ukujonga uvavanyo lwe-OCD2-Uvavanyo lwe-OCD3 - Ukubala uvavanyo lwe-OCDI-4-Uvavanyo lwe-OCD ekhoyo / yeFilosofi5 - Ukutya / ukuQeqesha uvavanyo lwe-OCDUvavanyo lwe-OCD lwe-Fortune yokuXelaI-7-yonakalisa uvavanyo lwe-OCDI-8-Uvavanyo lwe-OCD / lweHypochondriaI-9-Hit and Run OCD yovavanyoI-10-OCD yobufanasini-Uvavanyo lwe-HOCDUvavanyo lwe-11 lwe-OCDI-12-Iingcamango ezingaqhelekanga zovavanyo lwe-OCD13 - Ekunene / Ukuziva kuvavanyo lwe-OCDI-14-Uvavanyo lwe-OCD yokucinga ngomlingoI-15-Uvavanyo lwe-OCD yoPhononongo lwengqondo / lweemvakaleloI-16 -Ukufunda ngengqondo Uvavanyo lwe-OCDI-17-Uvavanyo lwe-OCD yokuziphatha18-Kufuneka Ukwazi Uvavanyo lwe-OCD19 -Uvavanyo lweSifo seSalathiso se-Olfactory20 -Uvavanyo lwe-OCD lweParanoia21 - Uvavanyo lwe-Pedophilia OCD-Uvavanyo lwe-POCD22-Uvavanyo lwe-OCD lokugqibelela23 -Uvavanyo lwe-OCD lwePerinatal24 - Uvavanyo lwe-OCD lwasemva kokubeleka25 - Uvavanyo lwe-OCD olusulungekileyo / olusulungekileyo lovavanyo lwe-OCD26 -Ubudlelwane be-OCD-Uvavanyo lwe-rOCD27-Uvavanyo lwezenkolo lwe-OCD / lweScrupulosity28 -Uxanduva lovavanyo lwe-OCDI-29 -Ukuphononongwa kovavanyo lwe-OCD30-Schizophrenia / Uloyiko lokuhamba nge-OCD e-Crazy31 -Ukuzilimaza / Uvavanyo lwe-OCD yokuzibulalaI-32-Uvavanyo lwe-OCD yokuziqhelanisa nezesondoI-33-Uvavanyo lwe-OCD ngokwesondoI-34-Uvavanyo lwe-OCD yoxinzelelo lweNtlalo35 -Uvavanyo lwe-OCD lweSomatic / Sensorimotor36-Uvavanyo lwe-OCD lweenkoleloI-37-Symmetry / Ucwangco lovavanyo lwe-OCDI-38 -Uvavanyo lweengcinga ze-OCD ezinobundlobongela / ezinobundlobongela
Fumana iziphumo zakho nge-imeyile